အမရပူရ | မြန်မာသွားရောက်ကြည့်ရှု
နေအိမ်→Categories မန္တလေး→အမရပူရ	123 >>
Category Archives: အမရပူရ
The Bagaya Kyaung (သို့မဟုတ် Bagaya ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း) အမရပူရအတွက်, မန္တလေးတဝိုက်ကဘုရငျဘကြီးတော်ကတည်ဆောက်လျက်ရှိအဖြစ်အစီရင်ခံနေသည် 1834. ဗမာထဲတွင်ကျောင်းအင်္ဂလိပ်ဘာသာဘုန်းကြီးကျောင်းမှဘာသာ. တစ်ခါတစ်ရံဘုန်းကြီးကျောင်းမှား Bagaya ကျောင်းဘုန်းကြီးကျောင်းအဖြစ်ရည်ညွှန်းတာဖြစ်ပါတယ်, which is … Continue reading →
Posted in, အမရပူရ
The beautiful Kyauktawgyi Pagoda in Amarapura (ထို့အပြင်မဟာသိကြားမင်း Ramsi စေတီတော်သို့မဟုတ်ဒေသအလိုက် Taungthaman Kyauktawgyi ကိုခေါ်) အတွင်းတည်ဆောက်ခဲ့ 1847 and isalarge white pagoda topped withagolden spire located on the Eastern edge of Taungthaman Lake just … Continue reading →
Mahagandayon Monastery in Amarapura, မန္တလေး (ထို့အပြင်ထို့ပြင်မဟာ Gandar Yone ကျောင်းတိုက်သို့မဟုတ် Mahagandhayon ကျောင်းတိုက်စာလုံးပေါင်း) ပတ်ပတ်လည်တည်ဆောက်ခဲ့ 1910 နှင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကောင်းဆုံးလူသိများဘုန်းတော်ကြီးသင်ကောလိပ်ရှုပ်ထွေးဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာပေါ်မှာထိုင် 20 acres situated on the Western bank of Taungthaman Lake not … Continue reading →